Ciidanka Dab-demiska oo u gurmaday guri ku gubtay degmada ibraahim koodbuur gaar ahaan xaafada gantaalaha – WARSOOR
Ciidanka Dab-demiska oo u gurmaday guri ku gubtay degmada ibraahim koodbuur gaar ahaan xaafada gantaalaha
Hargeysa – (warsoor) – Ciidanka Dab-demiska oo u gurmaday guri ku gubtay degmada ibraahim koodbuur gaar ahaan xaafada gantaalaha ama Magaalo Cambar.
Abaaro 10:00 AM ayaa lagu soo wargeliyay ciidanka Dabdemiska waxaana ku soo wargeliyay dabkaa dadweynaha goobtaas joogay Guri noociisu yahay Daar iyo Jiingad isku jira, waxaana sida dadweynuhu sheegeen dabkaa sababay Shoodh Laydh oo ka kacay guriga.
Ugu horayn waxaa ciidanka dabdemisku si deg dega ugu baxeen gurmadkaa waxaana ay ka hawlgaleen hawlgalkaa dab ee ka dhacay xaafada gantaalaha, waxaana hawlgalkaa qayb ka aha Taliyaha Ciidanka Dabdemiska, Taliye Ku Xigeenka iyo hawlwadeenada kala duwan ee ciidanka dabdemisak caasimada magaalada hargeysa.
Ugu dambayna waxaa ciidanka dabdemsiku ku guuleystay halwgalkaa dab oo muddo lagu guda jiray hawlgalkaa dab.
Warbaahinta Ciidanka Dab-demiska.
Abaanduulaha ciidanka XDS oo sheegay inay sameynayaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab